I-Studio anno 1659 - Iziko Lesixeko - Isikhululo esiPhakathi - I-Airbnb
I-Studio anno 1659 - Iziko Lesixeko - Isikhululo esiPhakathi
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguRob
Ifakwe kwindlu yokwenyani yomjelo waseDatshi, igumbi lethu lestudiyo eliqhelekileyo elinombono we "Koepelkerk" yaseAmsterdam yeyona ndawo ifanelekileyo yokubalekela kumbindi wesixeko esidala saseAmsterdam. Ifumaneka ngokufanelekileyo kumgama ohamba imizuzu emihlanu ukusuka kwisikhululo esiphakathi saseAmsterdam kwaye kumgama wokuhamba weendawo ezidumileyo ezinje ngeDam square, indlu ka-Anne Frank kunye nesithili saseJordaan esiphilayo, uya kuba nakho ukuyonwabela iAmsterdam njengoko sisenza yonke imihla. Sinethemba lokukwamkela kwisixeko sethu kungekudala!
Uya kuba nendlu yakho yesitudiyo enegumbi lokuhlambela elineshawa kunye nendawo encinci enento yokupheka amanzi, umatshini wekofu, itoaster, i-egg cooker kunye nefriji encinci. Zonke izinto eziluncedo (ikofu, iti, isepha kunye neshampu) zibandakanyiwe, ukuba kukho into oyiphosayo, ungalibazisi ukufowunela!
Asinawo umbono wokwenyani womjelo, kodwa isitrato sethu besikade singumjelo kwaye umbono wethu uyamangalisa kwaye asinabo abamelwane abachwechwelayo :)
4.86 · Izimvo eziyi-204
Simi kumbindi wedolophu, umgama nje wemizuzu emi-5 ukusuka kwisikhululo esiphakathi. Xa ugcina indawo uya kufumana inkcazo yendlela eneenkcukacha ngemiyalezo kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba ungene.
Sifumaneka kuzo zonke iingcebiso kunye nemibuzo, ukuba ufuna nantoni na unganqikazi ukusibiza!
Inombolo yomthetho: 0363 8241 B4C1 1400 419B